Mety hisy farany ve ny habibina? | news2dago |
Mety Hisy Farany Ve Ny Habibina?
news2dago 28 Aprily, 2009 12:54 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Matetika tokoa dia ny olona ratsy toetra no ela velona. Io ilay tonga @ fitenenana oe "irina ho faty vao ela velona". Maro maro tokoa ny olona tsy nanao na inona na inona no voagadra ny fitondrana ankehitriny ary tsy ela akory ilay mpivarom-boky voatifitra tsy nahy ary maty tsy tra-drano ihany koa. mariky ny habibina avokoa izany rehetra izany kanefa toa miorom-paka tsara tsy misy ahihina intsony ny hirodanany noho ny ramatahora ampiarina ankehitriny.
Rava miandalana ny tolona etsy ambohijatovo mbola mamy tokoa ny miaina ko. Toy izany koa ny any antsirabe satria dia miaramila mirongo basy no miaro ny toerana hivorina ka aleo manaja tena. Tanam-polo tokoa ve hiady @ basy marovava. Raha mba nanana fiadina indray dia hafa indray. Tampina tanteraka ny vavan'ny mpanohana ny ara-dalana satria na ny radio mada mbola nande kely aza ankehitriny tena moana tanteraka nanomboka androany.
Ho hita eo ny lazon'ady ny mpitarika ny tolona satria ny traikefa sisa no mila ampiadiana @ izao fotoana izao. Ny mafana (MFM) tokoa mantsy efa zatra ady @ fandravana fanjakana ka asa izay konokononiny any ambadika any ankehitriny. Mbola misitery daholo izany. Saika nosamborina alina tokoa ny praiminisitra Manandafy Rakotonirina. Tsy tontosa anefa izany fikasana izany.
Ny fiainana miakatra zao ny malaza sy iadivan'ny valalam-bemandry efa mihoatra ny 15.000 fmg izao ny ny sandan'ny Euro. Manaraka izany dia horoahana daholo koa ny mpandraharaha vaventy Rio tinto mitrandraka ny fasimainty sy ny etsy ambatovy ny resaka petrole moa dia efa lasan'ny total ny ady kle ankehitriny. Tsy mahagaga satria voazanaka indray ramalagasy be tokoa ny mpamadika koa.
Manjaka ny gaboraraka ankehitriny feno mpivarotra eran'ny lalana rehetra toy ny t@ fotoana ny repoblika faharoa ireny ny etsy analakely. Mitsangana avokoa ny fivarotana tsy ara-dalana rehetra ary eny ampovoan'ny arabe no manao izany ireto mpivarotra fripy sy jean ary koa mpivarotra kiraro tonta. Manorisory na ny mandalo eny analekely ary tena miteny irery mihitsy oe niverin-dalana ny malagasy izany.